IT-KOKO - Page7of 17 - IT is not just about 101001011...
ဖုန်းဘယ်မှာ ဝယ်ရင်ကောင်းမလဲ? (စင်္ကာပူ)
By အိုင်တီကိုကို on Wednesday, October 24, 2012
ကျွန်တော်ဖုန်းပျက်သွားတုန်းက ဖုန်းအလွတ်(no contract) လိုက်ဝယ်မယ်ဆိုပြီး လိုက်ရှာတာ နောက်ဆုံး ကောင်းဆုံးနဲ့ ဈေးမနည်းဆုံး ဆိုင် ၂ ဆိုင်တွေ့တယ်။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ကြိုက်တဲ့ ဖုန်းကို ကြည့်ပြီး ဆိုင်မှာ သွားဝယ်လိုက်ပေါ့။ ကျွန်တော်ကတော့ အဲ့လိုဘဲလုပ်တယ်။ ဆိုင်မှာသွားကြည့်ပြီးမှာ ဝယ်မယ်ဆိုရင် သူတို့က သေသေချာချာ ရှင်းပြမှာမဟုတ်ဘူး။ ပထမဆုံးဆိုင်ကတော့… http://www.whymobile.com/home.php နောက်တစ်ခုကတော့… http://www.mobilesquare.com.sg နှစ်ဆိုင်လုံးက ဈေးတူတူပါဘဲ ဆိုင်နေရာလည်း အရမ်းမကွာဘူး။ တခြားဆိုင်တွေနဲ့ ရှင်လိုက်ရင် ၅၀လောက် ဈေးကွာတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ဖုန်းဝယ်ချင်တယ်ဆိုရင် အပေါ်က ဆိုင်နှစ်ဆိုင်ကို အရင်ဆုံးဈေး ကြည့်ပြီးမှ တခြားဆိုင်တွေမှာ ဝယ်ပါ။ သေချာတာကတော့ ဈေးကွာနေတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော့အတွေ့အကြုံလေးနဲ့ သိတာလေးတွေ ရေးထားတာပါ။ တခြားကောင်းတဲ့ဆိုင်တွေ ရှိတယ်ဆိုလည်း ကွန်မန့်မှာ ရေးခဲ့လို့ရပါတယ်။ အိုင်တီကိုကို
Total GamePlay Studio ကနေ အသစ်ထုတ်လိုက်တဲ့ မြန်မာစစ်တုရင် ဂိမ်းကို အွန်လိုင်းမှာ စော့လို့ရနေပါပြီ။ ပြောတာတောင် နည်နည်းနောက်ကျနေပြီ။ ထွက်နေတာက အောက်တိုဘာ ၄ ရက်နေ့ကတည်းက ထွက်နေတာပါ။ ကျွန်တော် မြန်မာ စစ်တုရင်ကို မဆော့ဖူးဘူး။ အခုမှ ဘယ်လို ဆော့ရလဲ လိုက်ကြည့်နေတာ။ beta အဆင့်ဘဲရှိသေးတော့ bugs တွေတော့ ရှိနေပါသေးတယ်။ နောက်ထက် အသစ်အသစ်တွေ ထက်တိုးလာဖို့ရှိသလို့ beta 0.2 ထက်ထွက်ဖို့ ရှိပါသေးတယ်။ ဒီလင့် မှာ စော့လို့ရပါတယ်။ သေးစိတ်သိချင်ရင် တော့ ဖေ့ဘွတ် မှာ like လုပ်ပြီး bugs တွေတင်ပြလို့လဲရပါတယ်။ မြန်မာ့ စစ်တုရင် ကမ္ဘာကသိစေဖို့ ဆိုတာလေး ဖတ်လို့ကောင်းလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အိုင်တီကိုကို
B2B မှာဆရာ ထက်ကျော် ရေးထားတာလေး ဖတ်လို့ကောင်းလို့ အားလုံးဖတ်လို့ရအောင် ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဝေးရောက် မြန်မာတွေ အိမ်ပြန်လှနိုင်ပါစေဗျာ. ကျွန်တော် အပါအဝင်ပေါ့။
ကျွန်တော် ဖုန်းပျောက်ပြီးတော့ အသိတစ်ယောက်ဆီကနေ Nokia ဖုန်းလေး ခဏကိုင်သုံးနေခဲ့တယ်။ ပြောလို့ရတယ်၊ စာပို့လို့ရတယ်။ အဲ့လောက်ဘဲလုပ်လို့ရတယ်လေ။ Smart Phone ကိုင်လာတာ နည်းနည်းကြာသွားတော့ ရိုးရိုးဖုန်း သုံးရတာ အစဉ်မပြေတော့ဘူး။ အဲ့ဒါနဲ့ Starhub မှာ recontract လုပ်မလို့ သွားမေးတော့ အစက သုံးရာပေးရမယ်တဲ့ ၂၁လ ပြည့်ဖို့ ၁လ ဘဲလိုတော့တာကို သုံးရာ တောင်းတာကတော့ များပါတယ်။ နောက်တော့မှာ Hub Member ဆိုရင် ၁၀၀ ဘဲပေးရမယ်ဆိုပြီးပြောတယ်။ အပိုကြီး ပေးရတာကတော့ မမိုက်ဘူးဗျာ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော် လိုချင်တဲ့ဖုန်းကလဲ မရသေးဘူးဆိုတော့ contract ပြန်မလုပ်သေးဘဲနဲ့ ဖုန်းအသစ်တစ်လုံး ဝယ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ၁၀၀၊ ၂၀၀ လောက်တော့ သုံးမယ်ပေါ့ဗျာ။ အဲ့ဒါနဲ့ အွန်လိုင်းမှာလိုက်ရှာတာပေါ့။ …
အလုပ်များနေတာနဲ့ ဘလော့မှာ ဘားမှတောင် မတင်ဖြစ်တော့ဘူး။ အိမ်ကလူတွေနဲ့လည်း ကောင်းကောင်း စကားမပြေဖြစ်တာကြာနေပြီ။ သူတို့က အလုပ်လုပ်နေတော့ မနက်စောစောဆို အားလုံးအိမ်က ထွက်ကြတယ်။ ကျွန်တော်က part-time အလုပ်ဆိုတော့ များသောအားဖြင့် နေ့ခင်းလောက်ကနေ ည ၁နာရီ ၂နာရီလောက်မှ ပြန်ရောက်တယ်။ အမှန်တိုင်ပြောရရင် အခန်းမှာအတူတူနေတဲ့ ကျွန်တော်သူငယ်ချင်နဲ့တောင် ဘားမှပြောချိန်မရဘူး။ အရေးထဲ ဖုန်းကပျက်သွားတယ်။ ဘားမှမလုပ်ရသေးဘဲနဲ့ ပျက်သွားတယ်။ ဆိုင်မှာသွားပြတော့ motherboard လဲရမယ်တဲ့ $300ကျော်လောက်ပေးရမယ်ဆိုတော့ ဘားမှမပြောတော့ဘဲ ပြန်ယူလာခဲ့တယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ ဘားမှကိုင်စရာဖုန်းမရှိဘဲနဲ့ တစ်ပတ်လောက် ဒီအတိုင်းနေလိုက်သေးတယ်။ ပြီးတော့မှာ အသိတစ်ယောင်ဆီကနေ Nokia ဖုန်းသေးသေးလေး တစ်ခုတောင်းပြီး အခုကိုင်နေတယ်။ Starhub မှာ recontact လုပ်ဖို့က နည်းနည်းလိုသေးတော့ သူများဖုန်းလေးနဲ့ ကိုင်ပြီးနေရတော့မှာပေါ့။ အခုကျောင်းပြန်ဖွင့်တော့ အချိန်ဇယားက တော်တော်လေးမိုက်တယ်။ …